Maxbuuskii Ugu Wakhtiga Dheeraa Maxaabiista Ku Jira Xabsiyada Maraykanka Oo Lasii Daayay Iyo Da’da Uu Jiro Iyo Muddo Nus Qarni Ka Badan Oo Uu Adduunka Ka Maqnaa - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Maxbuuskii Ugu Wakhtiga Dheeraa Maxaabiista Ku Jira Xabsiyada Maraykanka Oo Lasii Daayay...
wladda Maraykanka ayaa oodda ka qaaday oo xorriyaddiisa u soo celisay maxbuuska loo aqoonsan yahay in uu yahay kan ugu da’da weynaa maxaabiista dalkaasi Maraykanka ku xidhan isaga oo ka soo laacay in ka badan nus qarni oo uu xabsiyada dalkaasi ku soo jiray.
John “Sonny” Franzese ayaa xabsiga la dhigay sannadkii 1967-kii illaa maantana xabsi ku jiray kaasi oo noloshiisa mudada intaasi le’eg xabsi ku jiray kadib markii sannadkaasi xabsi daa’in lagu xukumay wixii intaa ka dambeeyeyna xabsiyo kala duwan ku soo qaatay noloshiisa mar kali ahna aan helin xorriyad uu dibadda ugu soo baxo.
John “Sonny” Franzese mudadii uu xabsiga ku jiray oo ka badan 50 sanadood waxa is baddalo badani ka dhaceen adduunka waxaanu soo baxayaa isaga oo aad mooddo in uu dib u soo dhashay walaw uu wakhtigan da’diisu 100 sano kor u dhaaftay xanuuno dhawr ahna uu la il daran yahay kaasi oo warbaahintu la kulantay wakhti uu xabsiga ka soo baxayay oo uu ku luudayay biraha dadka da’da ahi taageersanadaan marka ay doonayaan in ay socdaan.
Waxa afaafka xabsiga laga soo daayay kula kulantay gabadh uu awaw u yahay iyo nin kale oo qaraabadiisa ka mid ah.
Maxbuuskan ayaa loo aqoonsanaa kii ugu wakhtiga dheeraa illaa imika maxaabiista ku diiwaan gashan xabsiyada dalkaasi Maraykanka.
John “Sonny” Franzese oo dhexda ka muuqdaa waa markii la xidhayay sannadkii 1967-kii
Tunisia: Askari Tunuusiyaan ah oo weeraray askar kale